ရန်ကုန်တမြို့လုံးက စည်းကမ်းမဲ့ စက်ဘီးတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူတော့မည် – Shwe Yaung Lan
Shwe Yaung Lan
[ January 26, 2022 ] ညဖက်ရောက်တိုင်း လက်ဝတ်လက်စား ချွတ်အိပ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတချို့….	News
[ January 26, 2022 ] လက်တွေ့မှာ သင်ထင်ထားတာထက် အဆများစွာပိုကြီးမားတဲ့အရာများ	SYL Amazing Photos
[ January 26, 2022 ] မသိလိုက်ပဲကုန်သွားတဲ့အချိန်တွေကို မြင်သာစေဖို့ သတိပေးမယ့်ပုံများ	SYL Amazing Photos
[ January 25, 2022 ] ခေတ်ပေါ်ပုံတွေနဲ့ရှေးဟောင်းပုံတွေကို ရောပြီး လှပလွန်းတဲ့ ပုံတွေဖန်တီးတဲ့ လူငယ်တစ်ဦး	SYL Amazing Photos
[ January 25, 2022 ] သီးပင်စားပင်တွေအတွက် အကောင်းဆုံး သဘာဝ ဓါတ်မြေသြဇာ ကြက်သွန်နီအခွံ ဆေးရည်..	News
[ January 24, 2022 ] အကြံနဲ့ ဥာဏ်ရဲ့ ကွာခြားချက်	News
[ January 18, 2022 ] ဘုရားရှိခိုးပြီး အိပ်စက်သူတိုင်း ရရှိလာနိုင်မည့် ကုသိုလ်ထူး အကျိုး (၁၇) ပါး	News
[ January 14, 2022 ] သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းကို လုံးဝ မထားသင့်သော နေရာ(၁၀)မျိုး	Uncategorized
[ December 23, 2021 ] ကိုရီးယားမြို့များကဲ့သို့ သာယာလှပပြီး နိုင်ငံခြားသားများ လာရောက်လည်ပတ်ခွင့်မရှိတဲ့ မြန်မာပြည်က မြို့ကလေး	News
[ December 17, 2021 ] အိပ်ရေးပျက်ပြီး အားအင်ကုန်ခမ်း မောပန်းနေသူတွေ ချက်ခြင်းလန်းဆန်းစေတဲ့ဆေးတစ်ခွက်…	News
[ December 15, 2021 ] ရေတွင်း ပြန်တူးကြည့်ပါ ( ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ် )	Uncategorized
[ December 14, 2021 ] ဗေဒင်သွားမေးစရာမလို ငွေမကုန်ပဲ တစ်သက်လုံးအတွက် ယတြာချေနည်းများ	News
[ August 30, 2021 ] အသားအရေ အိုမင်း ရင့်ရော်မှု ကနေ ကာကွယ်ပြီး ဖြူ ဝင်းစေဖို့ သဘာဝ နည်းလမ်း နဲ့ ပေါင်းတင်မယ်	Knowledge
[ August 27, 2021 ] အဝင်ကောမရှိတော့တဲ့သားဖုန်းလေးမျက်ရည်ခိုင်မှဖတ်ပါ	Lifestyle
[ August 7, 2021 ] အိမ်ရှင်မများအထူးသတိထားသင့်တဲ့အန္တာရာယ်ရှိသောကျောက်ငရုပ်ဆုံ(ကျောက်ကျည်ပွေ့)အကြောင်း	Knowledge
[ January 19, 2021 ] ကလေးမျက်နှာက မဝံ့မရဲလေးမို့ လက်ထဲကိုင်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံ၅၀တန်ကို..	Lifestyle
[ May 26, 2022 ] သူမရဲ့ တူမလေး မမွေးခင်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ အိပ်မက်တွေမြင်မက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ခြူးလေး	Celebrity
[ May 26, 2022 ] ပဲပုပ် နှင့် ကျန်းမာရေး	Uncategorized
[ May 26, 2022 ] မေမေတို့သိထားသင့်သော ကလေးငယ်ကျန်းမာရေး	Uncategorized
[ May 26, 2022 ] ရေသောက်ရမည့် နည်းစနစ်	Uncategorized
[ May 25, 2022 ] ရုပ်ချောလွန်းလို့ဆိုပြီး နိုင်ငံကနေ နှင်ထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ Omar Borkan တစ်ယောက် (၁၀) နှစ်အကြာ ဘယ်လိုရှိနေပြီလဲ?	Uncategorized
HomeNewsရန်ကုန်တမြို့လုံးက စည်းကမ်းမဲ့ စက်ဘီးတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူတော့မည်
ရန်ကုန်တမြို့လုံးက စည်းကမ်းမဲ့ စက်ဘီးတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူတော့မည်
January 20, 2021 Writer Magic News 0
ရန်ကုန်မြို့တွင်း စည်းကမ်းမဲ့စက်ဘီးစီးနင်းမှုများ ဥပဒေနှင့်အညီအရေးယူဆောင်ရွက်တော့မယ်လို့ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ သတိပေး
ရန်ကုန်မြို့တွင်း အများပြည်သူသုံး လမ်းမကြီးများတွင် စည်းကမ်းမဲ့စက်ဘီးစီးနင်းပါက ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အမှတ် ၃၉ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့စု တပ်ဖွဲ့စုမှူး ဒုတိယရဲမှူး ရဲထွန်းအောင်က သတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
“စက်ဘီးစီး ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ချမှတ်ထားတဲ့ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းနဲ့အညီ စီးနင်းဖို့နဲ့ အနှေး ယာဉ်မဝင်ရ လမ်းတွေမှာ စီးတာတွေ၊ လမ်းပြောင်းပြန် စီးတာတွေ၊ မီးနီဖြတ် စီးတာတွေ၊ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းချိုးဖောက်တာတွေကို ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”လို့ ၄င်းကဆိုပါတယ်။
ကမာရွတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ယာဉ်ကြောကျပ်တည်း သော နေရာဖြစ်သည့် လှည်းတန်းဈေးနှင့် လှည်းတန်း လမ်းဆုံမီးပွိုင့်တွင် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းနှင့် အညီ စက်ဘီးစီးနင်းရန်နှင့် စည်းကမ်းချိုးဖောက်ပါက ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပညာပေးဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လဆန်းပိုင်းမှ စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂ဝပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလဆန်းပိုင်းက ရန်ကုန်စည်ပင်နယ်နိမိတ်အတွင်း ဆိုင်ကယ်များ၊ လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်များနှင့် ဘက်ထရီစက်ဘီးများ စီးနင်းခြင်းမပြုကြရန် အသိပညာပေးခဲ့ပြီးနောက် အောက်တိုဘာ တတိယပအပတ်မှစတင်ပြီး ချလန်ဖြတ် အရေးယူမှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ စည်းကမ်းပျက်မော်တော်ယာဉ် ၂၆၂၆ စီး၊ ဆိုင်ကယ်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ် အစီး ၈၀ အပါအဝင် စုစုပေါင်း ၂၇၀၆ စီးနှင့် ကရိန်းဆွဲအရေးယူမှု ၁၁၃ စီးတို့ကို အရေးယူဆောင် ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဘာမှ မရှိတဲ့ဘဝ ကနေ အဆင်ပြေလာခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ခင်လှိုင်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ အန်တီငယ်
ယနေ့မှစတင်ကာ သီတဂူစက္ခုဒါနဆေးရုံ (ရန်ကုန်) မျက်စိစမ်းသပ်မှု စတင်ပြုလုပ်
သူမရဲ့ တူမလေး မမွေးခင်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ အိပ်မက်တွေမြင်မက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ခြူးလေး
ပဲပုပ် နှင့် ကျန်းမာရေး
ရုပ်ချောလွန်းလို့ဆိုပြီး နိုင်ငံကနေ နှင်ထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ Omar Borkan တစ်ယောက် (၁၀) နှစ်အကြာ ဘယ်လိုရှိနေပြီလဲ?